Imigaqo neMiqathango | Iinkampani zabucala zeeNkonzo eziManyeneyo zeNkampani Inc.
Lawula ishishini lakho
Khulisa ishishini lakho
Tsalela umnxeba nangaliphi na ixesha i24 / 7 1-888-444-4812
Ngamazwe ngamazwe: 1-661-310-2688
Ukuqala kweshishini kunye neenkonzo zokukhusela iiasethi zobuqu.
I-WEBSITE TERMS NEEMIQATHANGO
Le migaqo neemeko zilawula ukusebenzisa kwakho le website; ngokusebenzisa le website, uyayamkela le migaqo neemeko ngokupheleleyo. Ukuba awuvumelani nale migaqo kunye neemeko okanye nayiphi na inxalenye yale migaqo neemeko, akufanele usebenzise le website.
Ubuncinci ubuneminyaka yobudala be-18 ukuze usebenzise le webhusayithi. Ngokusebenzisa le webhusayithi nangokwamkela le migaqo kunye neemeko oqinisekisa ngazo ukuba ubuneminyaka yobudala eyi-18.
Le webhusayithi isebenzisa ikuki. Ngokusebenzisa le webhusayithi kwaye uvumelana nale miba, uyavuma ukuba inkampani yethu isebenzise ii-cookies ngokungqinelana nomgaqo-nkqubo wabucala we-General Corporate Services / umgaqo-nkqubo wabucala.
Imvume yokusebenzisa iwebhusayithi
Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, iiNkonzo eziManyanisiweyo, Inc. (inkampani eyiNevada) kunye / okanye iilayisensi zayo zisebenzisa uphawu lweNkampani kwaye ziba namalungelo kumalungelo obunini bemveliso kwiwebhusayithi kunye nezixhobo ezikwiwebhusayithi. Ngokuxhomekeke kwilayisensi engezantsi, onke la malungelo obunini bendawo agcinwe.
Unokujonga, ukhuphele i-caching kuphela, uprinte amaphepha okanye nayiphi na enye into kwiwebhusayithi ukuze uyisebenzise ngokwakho, ngokuxhomekeke kwizithintelo ezichazwe ngezantsi nakwezinye iindawo kule miqathango kunye neemeko.
Akunyanzelekanga phinda upapashe izinto ezivela kule webhusayithi (kubandakanywa nokuphindlwa kwenye iwebhusayithi); ukuthengisa, ukurentisa okanye iphepha-mvume elingezantsi kwiwebhusayithi; bonisa naziphi na izinto ezivela kwiwebhusayithi esidlangalaleni; phinda uvelise, uphindaphinde, ukhuphele okanye usebenzise ezinye izinto kule webhusayithi ngenjongo yokuthengisa; hlela okanye ngenye indlela uguqule nayiphi na impahla kwiwebhusayithi; okanye sabalalisa izinto ezivela kule webhusayithi ngaphandle komxholo, ukuba ikhona, ngokungqalileyo nangokucacileyo yenziwa yafumaneka ukuze isasazwe ngokutsha.
Apho umxholo wenziwe wahanjiswa ngokutsha, unokuhanjiswa kuphela ngemvume ebhaliweyo evela kwisigqeba seGeneral Corporate Services, Inc. ngumbutho weNevada.
Awuyikusebenzisa le website ngeyiphi indlela ebangela, okanye ingabangela, ukulimaza kwiwebhusayithi okanye ukuphazamiseka kokufumaneka okanye ukufikeleleka kwewebhusayithi; okanye nangayiphi na indlela engekho mthethweni, engekho mthethweni, inkohliso okanye inobungozi, okanye ngokuphathelele nayiphi na into engekho mthethweni, engekho mthethweni, inkohliso okanye inobungozi okanye umsebenzi.
Awuyikusebenzisa le webhsayithi ukukopisha, ukugcina, ukusasaza, ukuthumela, ukuthumela, ukusetyenziswa, ukupapasha okanye ukusabalalisa nayiphi na impahla equka (okanye idibene nayo) nayiphina i-spyware, i-virus yekhompyutheni, ihashe iTrojan, imbungu, i-keystroke logger, i-rootkit okanye enye software ekhohlakeleyo.
Akufuneki uqhube nayiphi na inkqubo yokuqokelela idatha okanye ezenzekelayo yokuqokelela idatha (kubandakanya ngaphandle kokukhawulelwa, ukusombiwa kwedatha, ukukhutshwa kwedatha kunye nokuvunwa kwedatha) malunga okanye kule webhusayithi ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yeNkonzo Jikelele.
Awuyikusebenzisa le website ukuze uthumele okanye uthumele unxibelelwano lwezorhwebo olungacelanga.
Akufuneki usebenzise le webhsayithi ngazo naziphi na iinjongo ezinxulumene nentengiso ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yeNkonzo eziManyanisiweyo.
Ukufikelela kwiindawo ezithile kule webhusayithi kuthintelwe. Iinkonzo eziManyanisiweyo ngokubanzi zinelungelo lokuthintela ukufikelela kwezinye iindawo kule webhusayithi, okanye ngokwenene le webhusayithi, ngokokubona kweeNkonzo eziManyanisiweyo.
Ukuba Iinkonzo zoMdibaniso ngokubanzi zikunika isazisi somsebenzisi kunye negama lokugqitha ukuze ukwazi ukufikelela kwiindawo ezithintelwe kule webhusayithi okanye ezinye izinto okanye iinkonzo, kufuneka uqinisekise ukuba i-ID yomsebenzisi kunye nephasiwedi zigcinwa ziyimfihlo.
Iinkonzo zoMdibaniso ngokubanzi zinokukhubaza isazisi sakho somsebenzisi kunye nephasiwedi kwi-General Corporate Services's discretion ngaphandle kwesaziso okanye inkcazo.
Kule miqathango kunye neemeko, "umxholo wakho womsebenzisi" uthetha izinto eziphathekayo (kubandakanywa ngaphandle kokunciphisa itekisi, imifanekiso, izinto ezilalelwayo, izinto zevidiyo kunye nezinto ezibonakalayo) ozithumela kule website, nangayiphi na injongo.
Unikezela ngeeNkonzo eziManyanisiweyo ngokubanzi, iphepha-mvume elingenakuchaphazeleka, elingakhethiyo, ngaphandle kwemvume yasebukhosini yokusebenzisa, ukuvelisa ngokutsha, ukulungelelanisa, ukupapasha, ukuhambisa nokuthumela umxholo wakho wabasebenzisi kuyo nayiphi na imidiya esele ikho okanye yexesha elizayo. Ukwabonelela ngeeNkonzo eziHlanganisiweyo ngokuBanzi ilungelo lokufumana iilayisenisi zala malungelo, kunye nelungelo lokuthatha isenzo sokwaphulwa kwala malungelo.
Umxholo wakho womsebenzisi akufuneki ube ungekho semthethweni okanye ungekho mthethweni, akufuneki ukuba wophule naliphi na ilungelo elisemthethweni lesithathu, kwaye akufuneki unikezele ngesenzo somthetho nokuba kungokuchasene nawe okanye iiNkonzo eziManyanisiweyo okanye umntu wesithathu (kwimeko nganye ephantsi kwawo nawuphi na umthetho osebenzayo) .
Akumelwe ungenise nayiphi na umxholo womsebenzisi kwiwebhsayithi ekhoyo okanye eyayiye yathethwa kuyo nayiphi na inkqubo esongelwayo okanye eyona mthethweni okanye isikhalazo esifanayo.
Iinkonzo zoMdibaniso ngokubanzi zinelungelo lokuhlela okanye lokususa nayiphi na into engeniswe kule webhusayithi, okanye egcinwe kwiiseva zeeNkonzo eziManyanisiweyo, okanye ezihanjisiweyo okanye ezipapashiwe kule webhusayithi.
Nokuba amalungelo eNkonzo eziManyanisiweyo ngokubanzi phantsi kwale migaqo kunye neemeko ngokunxulumene nomxholo womsebenzisi, Iinkonzo eziManyanisiweyo ngokubanzi azizibekeli ukubeka iliso ekuhanjisweni komxholo, okanye ukupapashwa komxholo kulo, iwebhusayithi.
Le webhusayithi inikezwe “njengoko injalo” ngaphandle kwemiboniso okanye iwaranti, icacisa okanye ibhekisiwe. Iinkonzo eziManyanisiweyo ngokubanzi azenzi zimiboniso okanye iiwaranti ngokunxulumene nale webhusayithi okanye ulwazi kunye nezixhobo ezibonelelwe kule webhusayithi.
Ngaphandle kokucalucalulwa kukhetho lwesiqendu esandulelayo, iiNkonzo eziManyanisiweyo eziNgekho mthethweni ziyaqinisekisa ukuba le webhusayithi izakuhlala ikho, okanye ifumaneke konke; okanye ulwazi olukule webhusayithi lugqibelele, luyinyani, aluchanekanga okanye alugwenxa.
Akukho nto kule webhusayithi yenza, okanye yenzelwe ukubumba, ukucebisa ngalo naluphi na uhlobo. Ukuba ufuna ingcebiso ngokunxulumene nawo nawuphi na umthetho, irhafu, imali okanye imicimbi yezonyango kuya kufuneka ubonane nengcali efanelekileyo.
Iinkonzo eziHlanganisiweyo ngokubanzi aziyi kuba noxanduva kuwe (nokuba kungaphantsi komthetho wonxibelelwano, umthetho wetoway okanye ngenye indlela) ngokunxulumene neziqulatho, okanye ukusetyenziswa, okanye okunye okunxulumene nale webhusayithi:
ukuya kuthi ga kuyo iwebhusayithi okanye ibonelelwe simahla, kuyo nayiphi na ilahleko ngqo;
nangayiphi nayiphi na indlela echanekileyo, ekhethekileyo okanye elahlekileyo; okanye
naziphi na ilahleko zeshishini, ukulahlekelwa kwengeniso, ingeniso, inzuzo okanye ukulondolozwa kwangaphambili, ukulahlekelwa kwezivumelwano okanye ubudlelwane bezoshishino, ukulahleka kwedumela okanye ukuthandwa, okanye ukulahleka okanye inkohlakalo yolwazi okanye idatha.
Oku kuncitshiswa koxanduva kusebenza nokuba Iinkonzo eziManyeneyo ziye zacetyiswa ngokucacileyo malunga nelahleko enokubakho.
Akukho nto kule disclaimer yewebhu iya kukhuphela okanye ukunciphisa umda kuyo nayiphi na iwaranti eqinisekiswe ngumthetho ukuba akuyi kuba semthethweni ukuyikhetha okanye ukunqanda; kwaye akukho nto kule disclaimer yewebhu iya kukhuphela okanye inqande uxanduva lweeNkonzo eziManyanisiweyo ngokubhekisele nakweyiphi na:
ukusweleka okanye ukonzakala komntu okubangelwa kukukhathalelwa kweNkonzo Jikelele; ubuqhetseba okanye ubuqhetseba bokuba yinkonzo yeNkonzo Jikelele; okanye into enokuba ingekho semthethweni okanye ingekho mthethweni kwiiNkonzo eziManyanisiweyo ukuba ingabandakanyi okanye isikelwe umda, okanye ukuzama okanye ukungacacisi ukukhupha okanye ukusikel 'umda, uxanduva lwayo.
Ngokusebenzisa le webhsayithi, uyavuma ukuba ukungabandakanywa kunye nokusikelwa umda koxanduva lokuchonga le webhusayithi kusengqiqweni.
Ukuba awucingi ukuba zisengqiqweni, kufuneka ungayisebenzisi le webhusayithi.
Uyayamkela into yokuba, njengeziko elithwala uxanduva, i-General Corporate Services, Inc., umbutho we-Nevada, unomdla wokunciphisa umda woxanduva lwamagosa kunye nabasebenzi. Uyavuma ukuba awuyi kuzisa naliphi na ibango buqu ngokuchasene namagosa eeNkonzo eziManyanisiweyo, abalawuli okanye abasebenzi ngokubhekiselela nakuphi na ukuphulukana nohleko olunxulumene newebhusayithi.
Ngaphandle kokucalucalulwa kumhlathi ongaphambili, uyavuma ukuba umda wewaranti kunye noxanduva olubekwe kule ndawo yokuchazwa kwewebhusayithi iya kukhusela amagosa eeNkonzo eziManyanisiweyo, abasebenzi, iiarhente, abaxhasi, abathe bawuphumelele umsebenzi, ababele izinto kunye neekhontrakthi ezingaphantsi kunye neeNkonzo eziManyanisiweyo, Inc.
Ukuba kukho naluphi na ubonelelo ngale disclaimer yewebhusayithi, okanye kufumaniseke ukuba ayinakunyanzeliswa phantsi komthetho osebenzayo, loo nto ayizukuchaphazela ukunyanzeliswa kwezinye izibonelelo zendlela yokuchazwa kwewebhusayithi.
Ngokwenjenje uvala iiNkonzo eziManyanisiweyo ngokubanzi kwaye uzibophelele ukugcina iiNkonzo eziManyanisiweyo ngokubanzi uzihlawulisile ngokuchasene nelahleko, ukonakaliswa, iindleko, amatyala kunye neenkcitho (kubandakanya ngaphandle komda iindleko zomthetho kunye naziphi na iimali ezihlawulwa ziiNkonzo eziManyeneyo zomntu wesithathu kwisicelo sebango okanye imbambano. ngengcebiso yaBacebisi boMthetho beeNkonzo eziManyanisiweyo) ekungenwe kubo okanye bakhathazwa ziiNkonzo eziManyanisiweyo eziphuma kuko nakuphi na ukwaphulwa kwakho naluphi na ubonelelo lwale miqathango, okanye ngenxa yokubanga ukuba waphule naluphi na ulungiselelo lwalemigaqo. iimeko.
Ukophulwa kwale Migaqo neMeko
Ngaphandle kokucalucalulwa kwamanye amalungelo eNkonzo eziManyanisiweyo phantsi kwale migaqo nemiqathango, ukuba wophula le migqaliselo nangayiphi na indlela, iiNkonzo zoMdibaniso ngokuBanzi zingathabatha inyathelo njengoko iinkonzo zeNkampani eziManyanisiweyo kufanelekile ukujongana nokophula umthetho, kubandakanya nokumisa ukufikelela kwakho Iwebhusayithi, ekuthintele ekufikeleleni kwiwebhusayithi, ibhloka iikhompyuter isebenzisa idilesi ye-IP ekufumaneni iwebhusayithi, ukunxibelelana nomnikezeli wakho weenkonzo ze-Intanethi ukucela ukuba bathintele ukufikelela kwakho kwiwebhusayithi kunye / okanye ukuzisa iinkqubo zenkundla ngakuwe.
Iinkonzo zoMdibaniso ngokuBanzi zinokuzihlaziya ezi meko kunye namaxesha ngamaxesha. Imigaqo ehlaziyiweyo kunye neemeko ziya kusebenza ekusetyenzisweni kwale webhusayithi ukusukela ngomhla wokupapashwa kwemibandela ehlaziyiweyo kunye neemeko kule webhusayithi. Nceda ujonge eli phepha rhoqo ukuqinisekisa ukuba uyayazi ingxelo yangoku.
Iinkonzo zoMdibaniso oMkhulu zinokudlulisa, ikontrakthi engaphantsi okanye ngenye indlela ijongane namalungelo eNkonzo yoBumbano ngokubanzi kunye / okanye izibophelelo phantsi kwale miqathango ngaphandle kokukwazisa okanye ukufumana imvume yakho.
Awukwazi ukudlulisela, i-sub-contract okanye enye inxulumene namalungelo akho kunye / okanye uxanduva phantsi kwalo mqathango kunye neemeko.
Ukuba ulungiselelo lwale miqathango kunye neemeko lugqitywe yiyo nayiphi na inkundla okanye elinye igunya eligunyazisiweyo ukuba lingabikho mthethweni kunye / okanye linganyanzeliseki, ezinye izibonelelo ziya kuqhubeka ukusebenza. Ukuba naluphi na ulungiselelo olungekho mthethweni kunye / okanye olunganyanzelisekiyo luya kuba semthethweni okanye lunyanzeliswe ukuba inxenye yalo icinyiwe, loo nxalenye iya kuthathwa njengecinywayo, kwaye konke okunye ukubonelela kuya kuqhubeka ukusebenza.
Le migqaliselo kunye neemeko zenza isivumelwano sonke esiphakathi kwakho kunye neeNkonzo eziManyanisiweyo ngokubhekisele ekusebenziseni kwakho le webhusayithi, kwaye zithathe indawo yazo zonke izivumelwano zangaphambili malunga nokusetyenziswa kwale webhusayithi.
Umthetho kunye noMthetho
Le migqaliselo kunye neemeko ziya kulawulwa kwaye iqingqwe ngokuhambelana nemithetho yeFlorida, kwaye nayiphi na imbambano enxulumene nale miqathango kunye neemeko iya kuba phantsi kolawulo olukhethekileyo lweenkundla ngaphakathi kweBroward County, eFlorida.
Ubhaliso kunye noGunyaziso
Iinkcukacha zeeNkonzo eziManyanisiweyo ngokubanzi
Igama elipheleleyo leeNkonzo eziManyanisiweyo ziiNkonzo eziManyanisiweyo ngokubanzi, Inc.
Iinkonzo zoMdibaniso ngokubanzi zibhalisiwe eNevada.
Idilesi ebhalisiweyo yeeNkonzo eziHlanganisiweyo ngokubanzi yi701 S Carson St., Ste. I-200, iCarson City, NV 89701
Idilesi ye-imeyile ngu-23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, CA 91321.
Ungaqhagamshelana neeNkonzo eziHlanganisiweyo ngokubanzi nge-imeyile ku- info@companiesinc.com.
Iinkampani zeShelf kunye nee-MDs
Iinkampani zeShell zikaRhulumente
Nevada Asset Trust Trust
Ilungelo lokushicilela © 2019 Companiesinc.com | Onke amalungelo agciniwe